Nyukireya yekutanga Transatomic Simba inoenda yakavhurika-sosi mushure mekuvhara | Linux Vakapindwa muropa
Nyukireya yekutanga Transatomic Power inoenda yakavhurika-sosi mushure mekuvhara
Haasi ese ekutanga anobudirira, kwete ese mapurojekiti anoita kunge anovimbisa anouya kuzobudirira. Ndozvazvakaita Transatomic Simba yakavambwa naMark Massie naDr Leslie Dewan muna Kubvumbi 2011, Nuclear Startup iyo yaive nechinangwa chekugadzira yavo Pfungwa yako yeNyukireya Reactor inoshanda zvakanyanya kupfuura zvakajairika. Asi pamhando iyi yemapurojekiti akakundikana panogara paine hupenyu, mune ino nyaya yave yakavhurika sosi, kubvira izvozvi chirongwa chakaburitswa uye chinopona kunyangwe kuvharwa kwebhizinesi iri.
Haisi nguva yekutanga yatinotaura nezvayo open source mapurojekiti Kunze kwesoftware kana Hardware, rusununguko rwunowedzera zvichienderera mberi sezvatakaona mune dzimwe nhau dzeLxA, senge mapurojekiti ebiology, mapurojekiti eF1, nezvimwe. Ino inguva yenyukireya fizikisi chirongwa, chimwe chinhu chakakomba uye icho chinoratidzika kunge chakavharwa musimboti, asi kuti mushure meichi chiitiko hachichazove. Iye zvino magetsi enyukireya avakarongera akavhurwa kune vese. Iyo projekiti haina kuvakwa mukati menguva yakatarwa yavakavimbisa uye ivo vaifanira kuzviita kuvhara mashandiro munaGunyana 25 ya2018, asi hazvisi zvese zvakaraswa, magadzirirwo avo ave pasi pematanho akavhurika sosi kuti vagone kuenderera mberi nekuvandudza izvo zvavaive vanazvo. Sezvo zvavakanyatsozivisa kubvira ikambani yamira, vanoramba vachishinga uye vane tarisiro yekuvandudza kukuru mune ramangwana renyukireya simba, kuvhura tekinoroji iyi kune wese munhu, vese vaongorori nevasimudziri.
Izvi zvataurwa kuburikidza neakaundi yavo yeTwitter, ichidzorera dhizaini yeiyi reactor kumashure mukutarisa. Iyo reactor yavari kugadzira ndeye transatomic mhando, ndokuti, inoshandisa munyu wakaumbwa panzvimbo pemvura yakajeka sezvinoitika mune zvakajairika mafuta anopisa. mabvazuva mhando yemagetsi inoshandisa mafuta emvura pane yakasimba solid, izvo zvinoita kuti kugadzirisa kuve nyore. Ivo zvakare vanogadzira yakaderera huwandu hwetsvina yenyukireya pagore, ari anenge 4.8 matani achienzaniswa nematoni gumi pagore kune zvakajairika. Uye kana izvo zvichiratidzika kunge zvidiki kwauri, zvakachengeteka zvakanyanya panjodzi uye vanoshanda pakumanikidza kwemhepo uye hazvina kunge zvakapetwa kazana izvi sevamwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nyukireya yekutanga Transatomic Power inoenda yakavhurika-sosi mushure mekuvhara
Iyo itsva vhezheni yeChannel 70 inosvika neshanduko nyowani
Mimwe yeanonyatso kuzivikanwa emulator yeLinux